Miyaad ku turunturootay? | Martech Zone
Haddii aad halkan wax aqriste ka ahayd, waad ogtahay taas Waxaan jeclahay StumbleUpon. Bloggeygu wuxuu sii wadaa inuu helo a tiro badan oo soo booqdayaal ah iyada oo loo marayo Stumbleupon.
Sida caadiga ah, dadku ma jecla inaad adigu iskaa u kobciso bogaggaaga bogagga sida StumbleUpon. Aniga Waxaan soo gudbiyay qoraalo ii gaar ah waagii hore - laakiin marar dhif ah. Haddii aan u maleynayay in qoraalka uu ahaa mid muran dhaliyay ama aan ku kasban lahaa dareen badan saameynteeda, aniga lafteyda ayaa ku turunturoon kara. Haddii kale, waxaan rajaynayaa in kuwa kale ay jeclaan doonaan bogga oo ay suul ka siin doonaan.
Taasi waxay tiri, ma jiraan wax khalad ah dib u noqoshada iyo suulka oo aad siiso bogagga kuwa kale horey ugu turunturoodeen boggaaga dhexdiisa. Haddii aad isku daydo inaad raadiso boggaaga ama degelkaaga StumbleUpon dhexdiisa, waxaad ka heli doontaa raadintoodu inay tahay mid naxariis badan oo ku kooban calaamadaha ay isticmaaleyaashu buuxinayaan.
Xasuusta dhinaca: Haddaan StumbleUpon ahaan lahaa, gebi ahaanba waan iska ahaan lahaa hirgeli Raadinta Khaaska ah ee Google il dakhli ahaan.
Adoo adeegsanaya Google, in kastoo, waxaad si fudud u heli kartaa boggeeda bogga uu ku turunturooday si aad cod dheeraad ah ugu tuurto! Boggeyga, waxaan kaliya raadiyaa:
goobta: stumbleupon.com martech.zone
Tani waxay i siineysaa liistada boggeyga kuwa kale ku turunturoodeen si aan wax uga qabto cod kale. Is-adeegsi? Laga yaabee - laakiin waxaan u janjeeraa jihada ay hagaagsan tahay maxaa yeelay qof kale ayaa horeyba u arkay jagada u qalanta in lagu turunturoodo.
Haddii aad ku jirto StumbleUpon, hubi inaad saaxiib igu dar.
31, 2008 at 11: 27 AM
Waad ku mahadsantahay qoraalkan. Hore ayaan isku dayay tan laakiin maan helin saxeexa Google sax ama wax. Oo waad saxantahay; StumbleUpon waa inay horumarisaa awoodahooda raadinta. Waxaan u maleynayaa inay sidoo kale fiicnaan laheyd haddii StumbleUpon uu kuu oggolaado inaad sheegato baloogyada kuu gaarka ah si aad ugu qori karto cusbooneysiin wakhti kasta oo qof ku turunturoodo mid ka mid ah boggagaaga.
Google ma ogaan dhammaan bogagga boggeyga ee loo gudbiyey SU.
Adiga oo kale, waxaan si xoogan u aaminsanahay SU maadaama ay ku kordhiso xaddiga ugu badan ee taraafikada balooggeyga.
Jan 2, 2009 saacadu markay ahayd 3:13 PM
Kaliya waxaan iska diiwaan galiyay koontada maxaa yeelay qof kastaa wuxuu yiraahdaa sida ugu wanaagsan ee loo wado baabuurta. Waxaan dhex mushaaxayay astaanteyda oo dhibaato ayaan kala kulmayaa bilaabida, waxay umuuqataa wax yar oo wareer ah. Miyaad kugula talineysaa hage kasta si aad u hubiso oo aad u aqriso sida ugu fiican ee loo bilaabi karo oo loo barto sida loo shaqeeyo?
Nov 3, 2009 saacadu markay tahay 10:09 PM
Waad ku mahadsantahay, qaabkaaga google wuxuu ahaa mid waxtar badan. Waxay umuuqataa inaan xoogaa qoraal ah kuhayo SU, kaliya ma arko taraafikada 🙁
Nov 4, 2009 at 4: 00 AM
Si aad si dhab ah uga faa'iideysato StumbleUpon, hubi inaad halkaa ku dhacdo oo aad u isticmaasho dhowr jeer usbuucii si aad u qiimeyso goobaha aad ku turunturootay. Marka aad dhisto muuqaal wanaagsan, waxaan aaminsanahay in saameyntaadu ay hagaagi doonto. Kaliya ha ku turunturoon boggagaaga, in kastoo! Taasi badanaa waa la iska indhatiri doonaa.